Cabdifataax Xasan Maxamed ‘Barawaani’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Tan iyo bilowgii nidaamyada dawladnimo ee cusub ”Modern State” waxa bilaabmay dar-dar xooggan oo la xidhiidha dhanka kala cidhiidhsiga, kala xadidda iyo halganka loogu jiro nooleynta iyo xabaalitaanka ilbaxnimooyinkii hore. Walow nidaamdaydii dawladnimo ee hore-ba ay ahaayeen kuwo ilbaxnimooyinka danayn gaar ah siiya, haddana waxa qasbayey qowmiyadaha tirada badan ee ay hal xukun hoos keeneen oo midba mida kale duulimaad ku tahay iyo kala maroorsiga kursiga boqortooyada. Taasi waxa ay sababtay in ilbaxnimooyinku aannay wax sidaas u sii weyn nooleynteedu aysan noqonin. Balse intan ay bilaabmatay dawladnimada cusubi ee ku dhisan qowmiyad-qowmiyadda waxa ummad weliba isku dayeysaa in ay hesho …
Jabbuuti waxa ay xornimada qaadatey sannadkii 1977-kii, waxa ay muddo u dhaxeysey 1894-19770kii hoostegi jirtey ama xukumi jirey gumeystihii Faransiiska. Magacii loo yaqaanney waqtigaas wuxuu ahaa French Somaliland (sidoo kale Afar and Isse Territory). Waxa maanta loo aqoonsanyahay Jabbuuti in ay tahay dal gaar ah oo madaxbannaan. Waxa ay ku taallaa baabul mandabka isku xidha badda cas iyo gacanka cadmeed, waa meel istiraatiiji aad xad dhaaf u ah xagga isku socodka. Waxa ay dhul ahaan jaar la tahay dalalka Eriteriya, Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxa Jabuuti wada dega asal ahaan Canfar iyo Soomaali, balse waxa aad u badan Soomaalida (T.A: qabiilka …
Baraha bulshada iyo golayaasha siyaasaddaba lagu hadal hayay imaatinka madaxweyne Farmaajo iyo raiisal wasaare Abiy Axmed, kuwaas oo ku soo wajahan magaalada Hargeysa. Haddaba waxa iswayddiin mudan maxaa keenay in labada masuul ay damcaan in ay yimaaddaan magaalada Hargeysa? Isla sidan oo kale ayaa madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Abiy ay u damceen in ay yimaaddaan sannadkii 2018-kii, kolkii ay soo galeen heshiiska isdhexgalka gobolka. Balse, arrinaas Soomaalilaan waa ay ka biyo diiday, diidmo qayaxanna waa ay ka muujisay. Shirkii Midowga Afrika iyo Kulankii Labada Madaxweyne! Kulankii 10-kii bishan Febraayo uga bilaabmay Midowga Afrika magaalada Addis Ababa, ayaa waxa isugu …
Cabdifataax Xasan Maxamed 'Barawaani', September 4, 2020
Nuur Faarax Xirsi waxa uu ku dhashay Degmada Burco, ee Gobolka Togdheer sannaddii 1962-dii. Halkaas ayuu kusoo qaatey waxbarashadiisii aasaasiga, oo kasoo bilaabmeysa dugsi Qur’aankii. Kaddibna waxa uu isla Degmadii Burco ka bilaabay Dugsigii Hoose/Dhexe. Kaddib waxa uu haddana usoo wareegay magaaalo madaxda dalka Soomaaliyeed ee Muqdisho. Isagoo ku biirey Dugsigii Hoose/Dhexe ee Halgamaa Maxamuud Xarbi. Dugsigaas ayuuna ku dhammeystay waxbarashadiisii hoose/dhexe, oo ku yaallay degmada Wardhiigley. Nuur intaas kaddib, waxa uu ku biirey Dugsigii Sare ee Jamaal Cabdinaasir, oo ay dawladda Masar gacanta ku haysey. Nuur Faraax Xirsi dabadeed markaas wuxuu bilaabay labadii sanno ee Gurmadka Qaranka. Wuxuuna Bare …
Dhaqanka, Afka Hooyo, Taariikhda Soomaaliya & DuniddaFalsafada iyo Siyaasada arrimaha bulshada
Cabdifataax Xasan Maxamed 'Barawaani', September 3, 2020
Xaadiisyada oo ah isha labaad ee diinta Islaamka laga qaato, laguna tilmaamo in ay yihiin hadalladii, falalkii iyo wixii raadad laga arkay suubbanaha Nebi Maxamed, waxa ay soo mareen marxalado kala duwan. Kuwaas oo ay saameynayeen duruufo kala jaad ah oo ku xeeraan aqoon ahaan, siyaasad ahaan, taariikh ahaan, garaad ahaan, iwm. Xadiisyadu waa qeybta ugu ballaadhan ee diinta xagga faahfaahin ahaan, dhaqan ahaan, dhinac kale haddii laga eegana waa isha sheekooyinka, khuraafaadka, iyo wax isku cayn iyo beyd go’an oo jid iyo jiho looga baxo aan lahayn. Xadiisyadu waa meesha ay kooxaha Muslinku ku kala baydheen, marka laga soo …